Cuntada 'Artichoke' - Sida loo sameeyo cuntada tallaabo tallaabo! | Cuntada Nutri
Cunnooyinka 'artichoke' waa mid ka mid ah kuwa ugu caan ah oo caan ah Dalkeena. Qorshaha miisaanka lumay ee la sheegay iyo sida magaceedaba ka muuqata, wuxuu ku saleysan yahay sifooyinka badan ee loo yaqaan 'artichoke' si loo helo qofka laga hadlayo in laga badiyo taxano kiilo ah waqtiga ugu gaaban ee suurogalka ah.
Cunnooyinka caanka ah ee loo yaqaan 'artichoke' ayaa leh nacfiyayaal badan iyo u doodayaal badan sida had iyo jeer ku dhacda cuntada noocan ah wacdinta mucjiso. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa faahfaahin dheeraad ah maxaa la dhahaa cunto, qaar ka mid ah faa'iidooyinkeeda iyo halisteeda sidaa darteed sidan ayaad si cad u tahay, inay mudan tahay iyo inkale in la yiraahdo habka slimming si loo baabi'iyo kiilo garaafka dheeriga ah ee sawirkaaga.
1 Slimming guryaha 'artichoke'
2 Waa maxay cuntada loo yaqaan 'artichoke diet'?
3 Maxaad ku cuni kartaa cuntada 'artichoke' ee caafimaadka qabta?
Slimming guryaha 'artichoke'
Artichoke waa cunto leh taxane ah guryaha kaamil ah si loo yareeyo culeyska iyo culeys. Sidaa darteed, waa muhiim in la isku daro sheygan iyo noocyada kale ee cuntada. sida nafaqada leh oo markaa la helo nooc cunto ah caafimaad leh oo dheellitiran kaamil ah jirka. Ugu weyn guryaha oo caato ah artichoke waa kuwan soo socda:
Waa wax fiican isha fiber markaa way ku caawin doontaa dareemo dhereg si dhakhso leh oo markaa iska ilaali cunista kalooriyada badan. Intaas waxaa sii dheer, 'artichoke' ayaa ku habboon in la xakameeyo mareenka mindhicirka wanaagsan iskana ilaali dhibaatooyinka ku saabsan dheef shiidka cuntada.
Waa a durayo fiican markaa waxay ka caawisaa jirka inuu baabi’iyo sun iyo wasakh badan wuxuuna ka hortagaa dareeraha.
Waa cunto leh nafaqooyin badan iyo kaloori aad u hooseeya markaa waa ku habboon yahay si aad u lumiso miisaanka hab caafimaad leh.
Marka la soo koobo, artichoke waa cunto ku habboon in lagu daro xaga cuntada maalin iyo maalin midna cun hab caafimaad leh oo aan dufan lahayn.
Waa maxay cuntada loo yaqaan 'artichoke diet'?
Cunnooyinka caanka ah ee loo yaqaan 'artichoke' ugu badnaan 3 maalmood isla markaana waqtigan yar lagu lumin karo ilaa 4 kiilo oo culeys ah. Waqtigaas kadib waa gabi ahaanba lama arki karo ku sii wad nooca noocan ah tan la'aanta nafaqooyinka muhiimka ah dhexdeeda waxay ku keeni kartaa dhibaatooyin caafimaad oo halis ah. Cuntadani waxay ku saleysan tahay cunista artichokes inta lagu jiro qado iyo casho iyo cabitaanka biyo badan si aad u hesho nadiifi noolaha oo dhan sunta iyo nijaasta. Inta lagu jiro 3da maalmood ee ay cuntadani socoto, waad qaadan kartaa noocyada kale ee cuntada sida waxyaabaha caanaha laga saaray, miraha, khudaarta, turkey iyo bariis bunni ah.
Adoo dhiirigelinaya qaadashada fiber sare, waad lumineysaa miisaan maalmo aad u yar. Iyadoo ay taasi jirto, hadaad dhameysato cuntada iyo caadooyinkaaga ma badashid waqtiga cuntada, aad ayey macquul u tahay inaad ku xanuunsato saameynta dib u celinta ee laga baqo ee waxa loogu yeero cunnooyinka mucjisada oo bogsada kiilo badan oo dheeri ah kuwa aad ku wayday cuntada caanka ah ee loo yaqaan 'artichoke diet'. Halkan waxaa ku yaal tusaale waxa ay noqon karto menu maalinle ah nooca noocan ah.
Quraacda waxaad kuheli kartaa koob bun ah caano, shaah ama cabitaanka miraha oo ay weheliyaan jeex rooti ah oo jiis ah ama 3 nooc oo buskud ah. Subax badh ah yogurt la jeexjeexay. Xilliga cuntada artichokes leh bariis bunni ah iyo xabbad miro ah. Cunto fudud ahaan yogurt la shiiday ama kafee leh caano. Cashada saddex artichokes la dubay oo ay weheliso cad cad rootiga oo dhan iyo qayb yar oo jiis ah.
Maxaad ku cuni kartaa cuntada 'artichoke' ee caafimaadka qabta?
Cunnooyinka 'artichoke' waa wax aad u fudud in la raaco sida badanaa wuxuu ku saleysan yahay markii aad cunaysay xaddi badan oo cuntadan ah inta lagu gudajiray 3 maalmood in cuntadu socoto. Sidan ayaad maalinta ugu bilaabi kartaa caafimaad casiirka khudradda taas oo maaddada ugu weyn ay tahay Artichoke. Waqtiga qadada waad sameyn kartaa baaquli bariis bunni ah kuna dar isla artichokes-ka. Sida aad u jeeddo, fure u ah cuntada noocan ah waxay ka kooban tahay isku-darka 'artichoke' inta jeer ee suurtogalka ah cuntadaada maalinlaha ah.
Hadaad rabto inaad sameyso cunto caafimaad leh oo loo yaqaan 'artichoke' taas oo ah inaad lumiso kiilo adigoon caafimaadkaaga qatar gelin, waa inaad ku dartaa tiro badan oo ah nafaqooyin nafaqo leh sida miro tayo sare leh, khudaar iyo borotiin. Intaas waxaa sii dheer, waad ku dari kartaa baastada ama digiraha inaad qaadato dhowr maalmood usbuucii. Sidan ayaad ku dheereyn kartaa cuntada 'artichoke' maalmo badan oo dheeri ah caafimaadkaagana khatar ma gelin doontid maadaama ay ku saabsan tahay cunto nafaqo leh oo dheellitiran. Marka xigta waan ku tusi doonaa tusaale menu in aad ku samayn karto artichoke-ka oo ah sheyga ugu muhiimsan.
Inta lagu jiro quraacda waad qaadan kartaa casiirka khudradda laga sameeyay artichokes iyo khudaar kale iyo buskud qaar ka mid ah. Subaxda dhexe waad qaadan kartaa gabal midho dabiici ah. Waqtiga qadada waxaad samayn kartaa naaso digaag la dubay oo ay weheliyaan shiil ah oo artichokes ah. Cunnada fudud yogurt la shiiday. Cashada cashada salad kala duwan oo ay weheliso omelet artichoke ah.
Marka la soo koobo, cuntada loo yaqaan 'artichoke' si adag ugu hadla waxay u maleyneysaa khatar dhab ah iyo khatar caafimaadka jirka. Waxaa loo tixgeliyaa inay tahay cuncun hypocaloric marka maalmaha ka dib, waad dareemi doontaa daciif noqo iyo xoog leh wax tamar ah. La'aan borotiinno badan iyo dufan muhiim ah jidhku waa isku dheelitirnaan la'aan. Taas bedelkeeda iyo sida aad ku aragtay dhowr khad oo kor ku xusan, waa suurtagal in la sameeyo nooc caafimaad ka mid ah cunnooyinka 'artichoke' oo aad sidoo kale awoodi doontid inaad lumiso taxano kiilo ah. Kaliya waa inaad wax ku darsataa nafaqooyinka muhiimka ah ee cunnooyinka noocaas ah oo raac nooc cunto oo dheellitiran.
Si aan u dhammeeyo, hoosta ayaan ku siinayaa muuqaal sharraxaad leh si aad si faahfaahsan u fahanto waxa ay ka kooban tahay cuntada caanka ah ee loo yaqaan 'artichoke'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cuntada Nutri » Caafimaadka » Cuntada 'Artichoke'
Cunnooyinka sababa caabuqa caloosha
Niyad jab aan Xilliyeed ahayn - Natiijooyin rajo leh oo ah Daaweynta Nalalka Cad ee Bright